(Emelitere ikpeazụ On: 03/03/2020)
Harry Potter fim ndị ihe ịga nke ọma film usoro niile oge. Many of the scenes from the Harry Potter films were shot within London itself. Whether you are a die hard fan of the Harry Potter movie or book series, London bụ doro anya na ebe kasị mma ileta maka ezigbo Harry Potter ahụmahụ. Chọrọ ịmata ihe 5 Ebe ileta gị Harry Potter Weekend na London? Save A Train ka weere a ndepụta mee ka gị na wizarding njem mfe na ndị ọzọ na-akpali akpali otu!
Nke a bụ kacha ahụmahụ anyị akwụkwọ! Lee mbụ aka na tent, ekike, na props eji na niile Harry Potter fim! Nzọụkwụ n'ime ụfọdụ nke ebe nke film tinyere; The Great Hall, Dumbledore ụlọ ọrụ na Hagrid obi.
Ebe ahụ a? gaba na n'elu ka Warner Bros. Studios Tour London. The Ime nke Harry Potter bụ a ọha na eze na mma ke Leavesden South England. Ọ bụghị ka e mgbagwoju anya na Wizarding World of Harry Potter nke Universal Studios isiokwu ogige. Ọ bụ a na-adịgide adịgide ngosi àjà ezigbo n'azụ Mpaghara ghọta nke Harry Potter fim. Nwere a kpokọtara ụbọchị na a n'azụ Mpaghara njem nke Harry Potter fim na Warner Bros. Studio Tour London.
N'ime Eze Cross Station, isi ọdụ ụgbọ okporo ígwè na London maka ụgbọ oloko na Edinburgh na Scotland, a njegharị mma A chọpụtawo, na a ibu Trolley ọkara agbakwunyere na mgbidi, ebe ị nwere ike re bịanyere gị onwe gị na Harry Potter oge.
N'etiti awa nke 9am na 9 pm ị nwere ike ịkwụ nwere a ọkachamara-echebe na otu nnyemaaka enyemaka ị na-ahụ foto kacha mma enwere, zuru ezu na Harry Potter ịchafụ na / ma ọ bụ wand. Ị nwere ike ka na-gị onwe gị na foto ebe a maka free.
Ọ bụrụ na ị nwere ike na-gaa n'oge elu oge na nwere ego mapụtara, i nwere ike iji tụlee ịzụta VIP Photo Pass lanyard. Nke a na-agụnye a n'elu ikpo okwu 9 ¾ lanyard, gị foto na kwụ n'ahịrị na-awụlikwa elu, niile maka £ 20.
Gịnị bụ a Harry Potter Weekend na London na-enweghị agbali a cauldron? Nke a kpokọtara mmanya Ahụmahụ bụ a 1 Ọrụ Nchịkwa 45 min immersive klas na London. Don gị uwe mwụda, jidere gị wands na inwe njikere maka gị kasị spirited potions klas ma, na a immersive kpokọtara mmanya Ahụmahụ abụọ na The cauldron, London.
mmanya free, Gluten na vegan nhọrọ niile dị
Ị chọrọ Embed anyị blog post “5 Places Iji Gị N'ihi na gị na Harry Potter Weekend Na London” na na gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/harry-potter-weekend-london/– (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)